हरर हिरोइनका आश्चर्य ! ~ The Nepal Romania
हरर हिरोइन दिया मास्केका लागि 'एकदिन एकरात'को कमब्याक सुखद रह्यो । खासगरी काठमाण्डूका रैथाने दर्शकमाझ दियाले राम्रो पब्लिसिटी बटुलिन् मोफसलमा फिडब्याक जेसुकै भएपनि । तर्साउने चलचित्र हेरिसकेपछि कतिपय निर्देशक र निर्माताहरुले दियालाई आफ्ना प्रोजेक्टहरुमा एप्रोच गर्न थालेका छन् । झन्डै आधादर्जन अफविट जनरका चलचित्र दियाको पाइपलाइनमा त छन् तर दिया तीमध्येबाट कुनै एकलाई चुज गर्न चाहन्छिन् । 'यो निकै कठिन रहेछ' उनले भनिन् 'स्क्रिप्टहरु हेरिरहेकी छु ।'
आगामी चलचित्रका एप्रोच जेसुकै भएपनि चल्दै गरेको हरर फिल्मको ह्याङओभर भने अझै निखि्रसकेको छैन उनमा । साता बितिसेकपनि दियाले राम्रा, नराम्रा र मध्यम खालका प्रतिक्रीयाहरु पाइरहेकी छिन् । अखबारमा छापिएका रिभ्यू र दर्शकले हेरिसकेपछि भन्ने रिभ्यूले यी हिस्सी हिरोइनलाई आश्चर्य तुल्याएको छ रे । 'किन ठीक विपरित कमेन्टहरु आइरहेको छ' दियालाई लाग्छ 'पत्रपत्रिकाहरु फिल्म नबुझिएको लेख्छन् भने साधारण दर्शकहरु राम्रो रहेको भन्छन् । बौद्धिक भनिनेलाई पत्याउने कि साधारण दर्शकलाई ?'दियाले अखबारमा छापिएका रिभ्यूका कटिङहरु पनि सुरक्षित राखेकी छिन् । अखबार मात्र होइन निर्देशकहरुले पनि फिल्म हेरेर दियालाई टिप्पणी गर्न थालेछन् । 'निर्देशक आलोक नेम्बाङले फिल्म हेरेर अलिक नबुझिएको बताए रे' दिया भन्छिन् 'मिश्रित कमेन्टहरु जसले मलाई बारम्बार याद दिलाइरहन्छन् । अरुभन्दा भन्दा पनि पत्रिकामा छापिएका र दर्शकले भनेका कुरा मेरालागि आश्चर्यका विषय बनिरहेका छन् ।'